Selection of Fruitful Significators – အခါပေး ဗေဒင်
akhapaybaydin7Oct 2015 18 Oct 2015 Uncategorized
(Please note, extensive references have been made in drafting this article and important sources are:
a) KP & Astrology 1990
b) Astrosecrets & Krishnamurtipaddhati Parts 1,2and 3
c) III Reader of Late Shri K.S.Krishnamurtiji)
More times than not, one may find that, when one wants to judgeaparticular matter, for example marriage, then almost all the nine planets come in as significators of either or all of the houses 2,7and 11. Suchasituation is no way rare and all too common an area where manyaKP Astrologer falters in selecting the right planets and rejecting the unfruitful ones. Most of the literature we have surveyed in KP Astrology to find an answer to this question, point us to one of the following two principles:
1. Supposingaperson who wants to know the time of marriage and also wants to find out the significators which will give marriage in their conjoined period. Then, according to this principle, first note the Sub in which each of the planets figuring asasignificator is deposited. If that Sub Lord isaSTRONG significator (see explanation below) of any or all houses of marriage (2,7or 11), then you have to select the planet asaFruitful significator, else not! Also, the planet SHOULD NOT beastrong significator of the bhaava/s, which negate the bhaava in question – in this case 1,6and 10 for marriage. This is one of the most important methods of eliminating planets which are “merely tempters and not real significators”.
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Sub-lord ကို အရင်စဉ်းစား။ Sub-lord သည် သက်ဆိုင်ရာဘာဝတွေ တစ်ခု (သို့) အားလုံးရဲ့ အားကောင်းတဲ့ အကျိုးဆောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် (အောက်တွင်ရှင်းပြထား) အဲဒီဂြိုဟ်ကို Fruitful significator အဖြစ်ယူပါ။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မယူပါနဲ့။
အဲဒီ Sub-lord တွေဟာ သက်ဆိုင်ရာဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ဘာဝတွေရဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်လည်း ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ၄င်းတို့ကို ပယ်လိုက် ပါ။
ဆိုလိုတာက အိမ်ထောင်ရေးအတွက်ဆိုရင် ၂-တန့်၊ ၇-တန့်၊ ၁၁-တန့် ဘာဝတွေကိုစဉ်းစားရမယ်။ ၂-တန့်၊ ၇-တန့်၊ ၁၁-တန့် အကျိုးဆောင် ဂြိုဟ်တွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ ၁-တန့်၊ ၆-တန့်၊ ၁၀-တန့် ဘာဝတွေရဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်တွေလည်း ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ၄င်းတို့ကို ပယ်လိုက်ပါ။
(Strong significator means – Planet/s in the star of bhaava occupant/s, or, if there are no planets in its stars, the bhaava occupant itself, or if the bhaava is empty (no occupant), then the planet/s in the owners’ star/s, or, if again there are no planets in the owner’s star/s the owner himself – please remember, these conditions are mutually exclusive. That is, if and only ifabhaava occupant has NO PLANETS in his stars, he becomesastrong significator; likewise, IF AND ONLY IFaBhaava is empty and there are no Planets in the owner’s stars, the bhaava owner becomesastrong significator!
However, if there are planets occupying the occupants’ or owner’s star/s, then those planets and the not the occupant or the owner of the bhaava are considered as the strong significators of the bhaava. This isarule reiterated by many illustrious scholars of KP Astrology in many of their articles and books.
(၁)။ ဘာဝတစ်ခုမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကိုစီးထားတဲ့ဂြိုဟ်သည် ပထမ အားအကောင်းဆုံး။
(၂)။ ဘာဝတစ်ခုမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ဂြိုဟ်သည် ဒုတိယ အားအကောင်းဆုံး။
(၃)။ ဘာဝသခင်ဂြိုဟ်ပိုင်နက္ခတ်ကိုစီးထားတဲ့ဂြိုဟ်သည် တတိယ အားအကောင်းဆုံး။
(၄)။ ဘာဝသခင်ဂြိုဟ်သည် စတုတ္ထ အားအကောင်းဆုံး။
The second principle in order to eliminate the weak planets is by considering the ruling planets. Here again, you have to select the ruling planets which are deposited in the SUB of suchaplanet which isastrong significator of the bhaava matter concerned. Again the planet/s which represent 2,7or 11 and 1,6or 10 (this is only for the marriage example and for other matters, consider the respective representative houses and their negation houses) have to be rejected outright as they always do harm to the matter at hand and never good.
ဒုတိယရွေးချယ်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ RP(စိုးမိုးဂြိုဟ်)တွေကို အသုံးချခြင်းပါပဲ။ ဒီနေရာမှာလည်း RP တိုင်းက Strong significator မဟုတ်ပါဘူး။ RP တွေထဲကမှ အထက်ကဖော်ပြထားသလို Sub-lord တွေနဲ့ ပြန်ပြီးရွေးထုတ်ရမှာပါ။
It may become necessary to apply one or both of the above principles depending on the number of planets you get as significators. Please remember, ONLY Strong Significators truly indicate the fructification of the event and are crucial in timing an event. The “weak significators” only fortify the event and may help to bring it to completion. But the event should and will always materialize in the Dasha, Bhukti Antara of the Strong Significator/s.
အထက်ကဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခု(သို့) နှစ်ခုလုံးကိုသုံး၍ Strong Significators တွေကို ရွေးချယ်ပါ။ Strong Significators တွေကသာလျှင် အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ဖြစ်ပျက်မည့် အချိန်ကာလကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Weak significators တွေကတော့ အားဖြည့်ပေး တာလောက်ပဲရှိပါမယ်။
သို့သော် အဖြစ်အပျက်တွေ တကယ်ဖြစ်တာကတော့ Strong Significators တွေရဲ့ ဒသာ၊ ဘုတ္တိ၊ အန္တရ တွေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
In conclusion, let us see what weak significators are:
a) Ifaplanet A occupies the II Bhaava and B and C are in the Star of A, then B and C are the “Strongest Significators of Bhaava II”.
Planet “A” ဟာ ၂-တန့်ဘာဝမှာ ရပ်တည်ပြီး B နဲ့ C တို့ဟာ A ပိုင်နက္ခတ်ကို စီးထားမယ်ဆိုရင် B နဲ့ C တို့ဟာ ၂-တန့်ဘာဝရဲ့ အားကောင်းတဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်တွေ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
b) If the condition in (a) is true, then the planet A itself which is the occupant of the II Bhaava, is rendered onlyaweak significator of the bhaava. However, that does not mean that planet A will never contribute to the bhaava matters or the results of II Bhaava never materialize during the period governed by planet A. But to time an event, we should consider only planets B and C in the first place in preference to A. Please bear in mind that planet A still gives the result of the bhaava it occupies, but when it has planets deposited in its star/s, it is only connected to the bhaava and notastrong significator of the bhaava.
သူ့နက္ခတ်ကို စီးထားတဲ့ဂြိုဟ်ရှိပြီဆိုရင် သူဟာ အဲဒီဘာဝကို ဆက်သွယ်ထားတာသာဖြစ်ပြီး (Only connected) အဲဒီဘာဝရဲ့ Strong significator မဟုတ်တော့ပါဘူး။
c) Now let us come to planets which are in conjunction with planets B and C. Let us for example say that planet M is in conjunction with planet B. Ifatrue conjunction exists between planet B and M (taking the western aspects orb into consideration as ruled by our Guruji), then the planet M is also rendered asaStrong Significator of the II Bhaava. It is then more powerful than planet A itself asasignificator of the II Bhaava.
Planet “B” နဲ့ “C” တို့နဲ့ ပူးထားတဲ့ဂြိုဟ်တွေရှိလာပြီဆိုရင်၊ ဥပမာ- “M” က “B” နဲ့ပူးတယ် ဆိုကြပါစို့။ (ဂြိုဟ်ပူးက အနောက်တိုင်းဂြိုဟ်ပူး အတိုင်း သူ့ရဲ့ Orb ထဲမှာ ရှိရမယ်။) ဒါဆိုရင် Planet “M” ဟာလည်း “A” ထက်ပိုအားကောင်းတဲ့ ၂-တန့်ဘာဝရဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်တွေ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
d) Suppose there is no true conjunction, and planet M happens to occupy only the same sign as planet B (as taken in classical Vedic astrology – two planets in the same sign are said to be in conjunction), then the planet M isaweak significator of the II Bhaava – that is, it is only connected to the II Bhaava. In strength it is weaker than planet A itself which is the occupant of the II Bhaava.
တကယ်လို့ “M” ဟာ “B” နဲ့ Western နည်းအရ အတိအကျ မပူးဘူးဆိုရင် “M” ဟာ ၂-တန့်ဘာဝနဲ့ ဆက်သွယ်တာပဲ ရှိပြီးတော့ ၂-တန့်မှာရပ်တဲ့ “A” ထက်တောင် အားနည်းသွားမှာပါ။
e) In another case, let us consideraplanet Q which is aspected by planet B. Now B isastrong significator of II Bhaava by being deposited in the star of planet A, the occupant of the bhaava. However, because planet Q is only aspected by planet B, planet Q is said to be only connected to the II Bhaava, or in other words, isaweak significator of the II Bhaava.
နောက်တစ်ခုက Planet “Q” သည် ၂-တန့်ဘာဝရဲ့ အားကောင်းတဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်ဖြစ်တဲ့ “B” ရဲ့ အမြင်ခံထား ရသော်လည်း Planet “Q” ကို ၂-တန့်ဘာဝနဲ့ ဆက်သွယ်တယ်လို့ပဲ ပြောရပါမယ်။ သူဟာ ၂-တန့်ဘာဝရဲ့ အားနည်းတဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်သာဖြစ်ပါမယ်။
f) However, please note….. if the planet in conjunction or aspect of the strong significator is actuallyaNode (Rahu or Ketu) then the node becomesaStrong Significator of the bhaava concerned. That is because the nodes are very powerful. Especially if there isatrue conjunction withanode, the node can be taken in the place of the actual significator planet because the node is so powerful.
ဒါပေမယ့် အားကောင်းတဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်တစ်လုံးရဲ့ ပူး/မြင်ခံရတဲ့ ဂြိုဟ်က Node (Rahu or Ketu) ဖြစ်ရင် အဲဒီ Node (Rahu or Ketu) ဟာ သက်ဆိုင်ရာဘာဝရဲ့ အားကောင်းတဲ့ အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ်တစ်လုံးဖြစ်လာပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Nodes တွေဟာ very powerful ဖြစ်ကြလို့ပါ။ အထူးသဖြင့် အားကောင်းတဲ့အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ် တစ်လုံးဟာ Node (Rahu or Ketu) တစ်လုံးနဲ့ အတိအကျ ပူးထားရင် (true conjunction) တကယ့်အကျိုးဆောင်ဂြိုဟ် နေရာမှာ အဲဒီ Node (Rahu or Ketu) ကို အစားထိုးရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Nodes တွေဟာ အလွန်အားကောင်း ကြလို့ပါ။
I hope, this clarifies the topic of selecting the most fruitful significators in judging any event. Please note, that this is equally applicable to both natal and horary charts and is one of the most important (and believe me, also the most difficult and confusing) aspects of Krishnamurtipaddhati.
ဤနည်းကို မူလဇာတာနှင့် ဟူးရားဇာတာ နှစ်ခုစလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
FB: Sayauzarni KP
Next Pro စနစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်း